ခေတ်သစ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားစေချင်တဲ့ အချက် ၉ ချက်
Homeပျော်ရွှင်ခြင်းခေတ်သစ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားစေချင်တဲ့ အချက် ၉ ချက်
၁။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။
တော်တော်များများ မေ့နေတတ်ကြလို့ ထိပ်ဆုံးက တင်ထားတာပါ။ တကယ်တော့ ဘဝမှာ ဘာပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်၊ ဘယ်လိုအလုပ်တွေပဲ လုပ်ချင်လုပ်ချင်၊ အရေးကြီးဆုံး အခြေခံလိုအပ်ချက်ဟာ ကျန်းမာရေးပါပဲ။ မကျန်းမာရင် ဘာမှ လုပ်မရပါဘူး။ အဲဒီအပြင် လူက ကျန်းမာနေရင် ကိုယ့်ရဲ့ Performance ကလည်း သိသိသာသာ တက်လာပါတယ်။ ဒါကို အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါ၊ လက်တွေ့ မလုပ်ဖြစ်ကြတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုလိုနှစ်သစ်မှာ တစ်ချက်လေး စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ Healthy Lifestyle တစ်ခု ရှိနေလားလို့။
Healthy diet စားပါ။ ရေများများ သောက်ပါ။
တစ်နေ့ကို နာရီဝက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လုပ်ပါ။
သင့်တော်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ထိန်းထားပါ။
အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်ပါ။ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ သင့်တော်သလို အနားပေးပါ။
ဘဝကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ဖြတ်သန်းပါ။
၂။ အကောင်းမြင်စိတ်ရယ်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့ရယ်။
ဒီနေ့ခေတ်ကို တစ်လုံးတည်းနဲ့ ဖော်ပြပါဆို ‘Uncertainty’ မသေချာခြင်းပါပဲ။ ဘဝဆိုတာ နဂိုကတည်းကမှ ထင်မှတ်မထားတာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေရတဲ့ ကြားထဲကို နည်းပညာ တိုးတက်ခြင်းနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် များလာခြင်းတွေက ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ဘာဆို ဘာမှမသေချာတော့ပါဘူး။ အရင်တုန်းက ဘွဲ့တစ်ခု ရထားရင်၊ ပညာတစ်ခု တတ်ထားရင် ဘဝက သေချာပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကျ နောက် ၁၀ နှစ်နေရင် ဘာဖြစ်နေမယ် ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု သင်ထားတာတွေ မသေချာတော့ဘူး။ အမြင်တွေ မသေချာတော့ဘူး။ လုပ်ငန်းတွေ မသေချာတော့ဘူး။
ဒီအတွက် နှစ်ခု လိုအပ်လာပါတယ်။
တစ်ခုက ဖြစ်လာသမျှ ပြဿနာတိုင်းကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် Adversity Quotient မြင့်ဖို့။
မိုးမရွာလောက်ပါဘူးကွာ ဆိုပြီး ထီးမယူဘဲ အိမ်က ထွက်လာတာဟာ အကောင်းမြင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါ ပေါ့တာပါ။ သေရင်လည်း ဒါတွေက ချန်ထားခဲ့ရတာပဲ ဆိုပြီး မကြိုးစားဘဲ နေတာဟာလည်း အကောင်းမြင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါ ပျင်းတာပါ။ အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်ပါရက်နဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံရတဲ့အခါ ရှေ့ဆက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေတိုင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်ဖို့ပါ။ Flexibility လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ခေတ်ကို ဘာဖြစ်လာမလဲ မှန်းဆလို့ မရပါဘူး။ အပြောင်းအလဲကိုလည်း တားဆီးလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဲဒီအပြောင်းအလဲနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အံဝင်အောင်ပဲ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ AQ နဲ့ Flexibility ဟာ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
၃။ အစားထိုးရခက်သူ ဖြစ်ပါစေ။
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတော့ အခြေခံလုပ်သားတွေ အလုပ်ပြုတ်ကုန်တယ်။ နည်းပညာတွေဟာ လူတွေရဲ့ နေရာကို ပိုလို့ ပိုလို့ အစားထိုး ဝင်ရောက်လာတော့မယ်။ ဥပမာတစ်ခု ပေးပါရစေ။ Chat bot ဆိုတဲ့ နည်းပညာနဲ့ လူအယောက် ထောင်ပေါင်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း မက်ဆေ့ပို့လို့ ရလာတဲ့ခေတ်မှာ ကိုယ်က အဲဒီလို မက်ဆေ့ကတဆင့် Customer နဲ့ စကားပြောတာလောက်ပဲ လုပ်တတ်နေမယ်ဆို သေချာပေါက် အလုပ်ပြုတ်တော့မှာပါ။
အဲဒီအတွက် တစ်နေရာရာမှာ အထူးပြုတဲ့ Specialized knowledge ရှိဖို့ လိုအပ်လာတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီခေတ်မှာ အလုပ်ရဖို့ မသေချာတော့ဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးကြည့်ပါ။ ငါဟာ ဘယ်လောက်အစားထိုးရ ခက်တဲ့လူလဲလို့။ သိပ်လွယ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သေချာတယ်၊ အနာဂတ်မှာ ပြဿနာတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၄။ ကိုယ့်ပုစ္ဆာ ကိုယ်ဖြေပါ။
ရုပ်မလှတဲ့သူက မင်းသားဖြစ်ဖို့ ခက်တယ်။ အသံမကောင်းတဲ့သူက အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ ခက်တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ ချင်း (ဂျင်း) တွေမိပြီး အချိန်မကုန်စေချင်ဘူး။ လောကမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်သိ၊ ကိုယ့် အားသာချက် ကိုယ်သိ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်သိဖို့ လိုတယ်။
ဘဝဆိုတာ စာမေးပွဲတစ်ခု ဆိုရင် အဲဒီစာမေးပွဲမှာ ကိုယ့်ကို ပေးလာတဲ့ ပုစ္ဆာကိုပဲ ဖြေရတယ်။ သူများပုစ္ဆာ ဝင်ဖြေချင်လို့ မရသလို၊ သူ့ပုစ္ဆာက လွယ်တယ်၊ ငါ့ပုစ္ဆာက ခက်တယ် အော်နေလို့လည်း မရဘူးဆိုတာကို သိထားပေးပါ။
ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေ ရှိပေမဲ့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ စိတ်ဆင်းရဲနေရသူတွေ၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြတဲ့ အိမ်ထောင်တွေ၊ မသာယာကြတဲ့ မိသားစုတွေက ပိုများပါတယ်။ သေရင်လည်း ထားခဲ့ရတာပါပဲ၊ သို့သော် ရှင်နေတုန်းမှာတော့ ငွေက လိုအပ်ပါတယ်။
ရိုးသားမှုကို တန်ဖိုးထားလား၊ ငွေရှိုဖို့ လိုတယ်။ မိသားစုကို ချစ်လား၊ ငွေရှိဖို့ လိုတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေချင်လား၊ ငွေရှိဖို့လိုတယ်။ မိဘကို ဆေးကုပေးချင်လား၊ ငွေရှိဖို့ လိုတယ်။ ဘာပဲလုပ်ချင် လုပ်ချင် အခြေခံအနေနဲ့ ငွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ငွေကို ကြိုးစားရှာပါ။ အသုံးအဖြုန်းလျှော့ပါ။ စုပါ။
၆။ ကိုယ့်တန်ဖိုးထားမှု ကိုယ်သိပါ။
ရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်မှုတွေ သိပ်များလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေက ပိုက်ဆံချမ်းသာရင် ပြီးရော၊ နာမည်ကြီးရင် ပြီးရော၊ အောင်မြင်ရင် ပြီးရော ဘာမဆို လုပ်မယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတယ်။
အဲ့လိုလူတွေကြားထဲမှာ မယိမ်းမယိုင်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ် ဘာကို တန်ဖိုးထားတာလဲ သိဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီအတိုင်း ခိုင်ခိုင်မာမာ နေနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
၇။ ဦးနှောက်အလေးချိန် ပိုပိုစီးလာစေဖို့
ခေတ်ကြီးက အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။ တောင်းဆိုမှု အသစ်တွေ လုပ်နေတယ်။ တစ်ဖက်မှာကျတော့လည်း အလုပ်တွေ များလွန်းတဲ့အခါ လေ့လာသင်ယူဖို့တွေ အချိန်မပေးနိုင် ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။
လူဟာ မနက်ထက် ညမှာ ဦးနှောက်က အလေးချိန် ပိုစီးနေရမယ် ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ၊ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ငါ ဒီနေ့ ဘာများ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသလဲ။ တခုခု အသစ်သိလိုက်ရတယ် ဆိုမှ အိပ်ပါ။
၈။ ပိုပေးရတဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်ပါစေ
ပရဟိတ ဆိုတာ ဘဝတစ်ခုလုံး မြှုပ်နှံပြီး လုပ်နိုင်တော့မှ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းသွားရင်း လမ်းမသိလို့ လာမေးသူကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေပေးလိုက်တာ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်၊ အဘိုး အဘွားတစ်ယောက် တက်လာတဲ့အခါ ထိုင်ခုံနေရာ ဖယ်ပေးလိုက်တာ၊ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့က မြေကွက်လပ်လေးမှာ ‘ကားမရပ်ရ’ အစား ‘ကားရပ်လိုလျှင် ဖုန်းနံပါတ် ချန်ထားခဲ့ပေးပါ’ ဆိုပြီး ရေးထားလိုက်တာတွေဟာလည်း ပရဟိတပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားနေကြတုန်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လမ်းဆုံမှာ အခိုက်အတန့်သဘော တွေ့ကြဆုံကြတာပါ။ အဲ့လို ဆုံတုန်းမှာ သူ့ကို ဘယ်လိုလေးများ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးလိုက်ရမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်အခံလေးနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်မယ်ဆို အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ဘဝလေးလည်း အေးချမ်းပါတယ်။ ဘယ်လိုခွဲခွာမှုအတွက်မဆို နောင်တ ရစရာလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့။
တကယ်တော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်ဟာ အပေးနဲ့အယူ ယှဉ်လာတိုင်း ကိုယ့်ဘက်က ပေးလိုက်ရတာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့ စိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
အောင်မြင်လာရင် မနာလို ဖြစ်ကြမယ်၊ ရှုံးနိမ့်ရင်လည်း လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ကြမယ်၊ ကိုယ် သေချာမသိလည်း သွားပုပ်လေလွင့် ပြောကြမယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေါ်လာတော့ ပိုဆိုးတယ်။ အားလုံးက ဒီအပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ အပေါ်ယံအချက်တွေနဲ့ပဲ မှတ်ချက်တွေ ပေးနေ၊ ဝေဖန်နေ၊ ဆဲဆိုနေကြတာ။ ပြောရရင် ဒါ လူ့သဘာဝပဲ။
ဒါကြောင့် အဲ့လို ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အတက်အကျ ဖြစ်နေသရွေ့ ဘယ်တော့မှ ပျော်ရွှင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။
ေခတ္သစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေစခ်င္တဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္
၁။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေမ့ေနတတ္ၾကလို႔ ထိပ္ဆုံးက တင္ထားတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘဝမွာ ဘာပဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ခ်င္၊ ဘယ္လိုအလုပ္ေတြပဲ လုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္၊ အေရးႀကီးဆုံး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဟာ က်န္းမာေရးပါပဲ။ မက်န္းမာရင္ ဘာမွ လုပ္မရပါဘူး။ အဲဒီအျပင္ လူက က်န္းမာေနရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ Performance ကလည္း သိသိသာသာ တက္လာပါတယ္။ ဒါကို အားလုံးလည္း သိၿပီးသားပါ၊ လက္ေတြ႕ မလုပ္ျဖစ္ၾကတာပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုလိုႏွစ္သစ္မွာ တစ္ခ်က္ေလး စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫႊတ္တဲ့ Healthy Lifestyle တစ္ခု ရွိေနလားလို႔။
Healthy diet စားပါ။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ပါ။
တစ္ေန႔ကို နာရီဝက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား လုပ္ပါ။
သင့္ေတာ္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာ ထိန္းထားပါ။
အိပ္ေရးဝ၀ အိပ္ပါ။ ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ သင့္ေတာ္သလို အနားေပးပါ။
ဘဝကို အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ျဖတ္သန္းပါ။
၂။ အေကာင္းျမင္စိတ္ရယ္၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ဖို႔ရယ္။
ဒီေန႔ေခတ္ကို တစ္လုံးတည္းနဲ႔ ေဖာ္ျပပါဆို ‘Uncertainty’ မေသခ်ာျခင္းပါပဲ။ ဘဝဆိုတာ နဂိုကတည္းကမွ ထင္မွတ္မထားတာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနရတဲ့ ၾကားထဲကို နည္းပညာ တိုးတက္ျခင္းနဲ႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလာျခင္းေတြက ထပ္ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ ဘာဆို ဘာမွမေသခ်ာေတာ့ပါဘူး။ အရင္တုန္းက ဘြဲ႕တစ္ခု ရထားရင္၊ ပညာတစ္ခု တတ္ထားရင္ ဘဝက ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္က် ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ေနရင္ ဘာျဖစ္ေနမယ္ ဘယ္သူမွ မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခု သင္ထားတာေတြ မေသခ်ာေတာ့ဘူး။ အျမင္ေတြ မေသခ်ာေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းေတြ မေသခ်ာေတာ့ဘူး။
ဒီအတြက္ ႏွစ္ခု လိုအပ္လာပါတယ္။
တစ္ခုက ျဖစ္လာသမွ် ျပႆနာတိုင္းကို အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ Adversity Quotient ျမင့္ဖို႔။
မိုးမ႐ြာေလာက္ပါဘူးကြာ ဆိုၿပီး ထီးမယူဘဲ အိမ္က ထြက္လာတာဟာ အေကာင္းျမင္တာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါ ေပါ့တာပါ။ ေသရင္လည္း ဒါေတြက ခ်န္ထားခဲ့ရတာပဲ ဆိုၿပီး မႀကိဳးစားဘဲ ေနတာဟာလည္း အေကာင္းျမင္တာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါ ပ်င္းတာပါ။ အေကာင္းျမင္စိတ္ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္အေကာင္းဆုံး လုပ္ပါရက္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္မႈေတြ၊ အဆင္မေျပမႈေတြ ႀကဳံရတဲ့အခါ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိကို ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနတိုင္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္ဖို႔ပါ။ Flexibility လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေခတ္ကို ဘာျဖစ္လာမလဲ မွန္းဆလို႔ မရပါဘူး။ အေျပာင္းအလဲကိုလည္း တားဆီးလို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဲဒီအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အံဝင္ေအာင္ပဲ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီ AQ နဲ႔ Flexibility ဟာ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ အေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။
၃။ အစားထိုးရခက္သူ ျဖစ္ပါေစ။
နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာေတာ့ အေျခခံလုပ္သားေတြ အလုပ္ျပဳတ္ကုန္တယ္။ နည္းပညာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ ေနရာကို ပိုလို႔ ပိုလို႔ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာေတာ့မယ္။ ဥပမာတစ္ခု ေပးပါရေစ။ Chat bot ဆိုတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ လူအေယာက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မက္ေဆ့ပို႔လို႔ ရလာတဲ့ေခတ္မွာ ကိုယ္က အဲဒီလို မက္ေဆ့ကတဆင့္ Customer နဲ႔ စကားေျပာတာေလာက္ပဲ လုပ္တတ္ေနမယ္ဆို ေသခ်ာေပါက္ အလုပ္ျပဳတ္ေတာ့မွာပါ။
အဲဒီအတြက္ တစ္ေနရာရာမွာ အထူးျပဳတဲ့ Specialized knowledge ရွိဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဒီေခတ္မွာ အလုပ္ရဖို႔ မေသခ်ာေတာ့ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမးၾကည့္ပါ။ ငါဟာ ဘယ္ေလာက္အစားထိုးရ ခက္တဲ့လူလဲလို႔။ သိပ္လြယ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ အနာဂတ္မွာ ျပႆနာေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။
၄။ ကိုယ့္ပုစာၦ ကိုယ္ေျဖပါ။
႐ုပ္မလွတဲ့သူက မင္းသားျဖစ္ဖို႔ ခက္တယ္။ အသံမေကာင္းတဲ့သူက အဆိုေတာ္ျဖစ္ဖို႔ ခက္တယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ ခ်င္း (ဂ်င္း) ေတြမိၿပီး အခ်ိန္မကုန္ေစခ်င္ဘူး။ ေလာကမွာ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္သိ၊ ကိုယ့္ အားသာခ်က္ ကိုယ္သိ၊ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာ ကိုယ္သိဖို႔ လိုတယ္။
ဘဝဆိုတာ စာေမးပြဲတစ္ခု ဆိုရင္ အဲဒီစာေမးပြဲမွာ ကိုယ့္ကို ေပးလာတဲ့ ပုစာၦကိုပဲ ေျဖရတယ္။ သူမ်ားပုစာၦ ဝင္ေျဖခ်င္လို႔ မရသလို၊ သူ႔ပုစာၦက လြယ္တယ္၊ ငါ့ပုစာၦက ခက္တယ္ ေအာ္ေနလို႔လည္း မရဘူးဆိုတာကို သိထားေပးပါ။
ပိုက္ဆံခ်မ္းသာၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနတဲ့သူေတြ ရွိေပမဲ့ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ စိတ္ဆင္းရဲေနရသူေတြ၊ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ေတြ၊ မသာယာၾကတဲ့ မိသားစုေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။ ေသရင္လည္း ထားခဲ့ရတာပါပဲ၊ သို႔ေသာ္ ရွင္ေနတုန္းမွာေတာ့ ေငြက လိုအပ္ပါတယ္။
႐ိုးသားမႈကို တန္ဖိုးထားလား၊ ေငြရႈိဖို႔ လိုတယ္။ မိသားစုကို ခ်စ္လား၊ ေငြရွိဖို႔ လိုတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပခ်င္လား၊ ေငြရွိဖို႔လိုတယ္။ မိဘကို ေဆးကုေပးခ်င္လား၊ ေငြရွိဖို႔ လိုတယ္။ ဘာပဲလုပ္ခ်င္ လုပ္ခ်င္ အေျခခံအေနနဲ႔ ေငြရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ ေငြကို ႀကိဳးစားရွာပါ။ အသုံးအျဖဳန္းေလွ်ာ့ပါ။ စုပါ။
၆။ ကိုယ့္တန္ဖိုးထားမႈ ကိုယ္သိပါ။
႐ုပ္ဝတၳဳကိုးကြယ္မႈေတြ သိပ္မ်ားလာတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူေတြက ပိုက္ဆံခ်မ္းသာရင္ ၿပီးေရာ၊ နာမည္ႀကီးရင္ ၿပီးေရာ၊ ေအာင္ျမင္ရင္ ၿပီးေရာ ဘာမဆို လုပ္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတယ္။
အဲ့လိုလူေတြၾကားထဲမွာ မယိမ္းမယိုင္နဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ္ ဘာကို တန္ဖိုးထားတာလဲ သိဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီအတိုင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေနႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
၇။ ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ ပိုပိုစီးလာေစဖို႔
ေခတ္ႀကီးက အၿမဲေျပာင္းလဲေနတယ္။ ေတာင္းဆိုမႈ အသစ္ေတြ လုပ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္မွာက်ေတာ့လည္း အလုပ္ေတြ မ်ားလြန္းတဲ့အခါ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ေတြ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။
လူဟာ မနက္ထက္ ညမွာ ဦးေႏွာက္က အေလးခ်ိန္ ပိုစီးေနရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ၊ ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတိုင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ငါ ဒီေန႔ ဘာမ်ား ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသလဲ။ တခုခု အသစ္သိလိုက္ရတယ္ ဆိုမွ အိပ္ပါ။
၈။ ပိုေပးရတဲ့သူ ကိုယ္ျဖစ္ပါေစ
ပရဟိတ ဆိုတာ ဘဝတစ္ခုလုံး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွ ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လမ္းသြားရင္း လမ္းမသိလို႔ လာေမးသူကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖေပးလိုက္တာ၊ ဘတ္စ္ကားေပၚကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ေယာက္၊ အဘိုး အဘြားတစ္ေယာက္ တက္လာတဲ့အခါ ထိုင္ခုံေနရာ ဖယ္ေပးလိုက္တာ၊ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕က ေျမကြက္လပ္ေလးမွာ ‘ကားမရပ္ရ’ အစား ‘ကားရပ္လိုလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ ခ်န္ထားခဲ့ေပးပါ’ ဆိုၿပီး ေရးထားလိုက္တာေတြဟာလည္း ပရဟိတပါပဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြားေနၾကတုန္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လမ္းဆုံမွာ အခိုက္အတန္႔သေဘာ ေတြ႕ၾကဆုံၾကတာပါ။ အဲ့လို ဆုံတုန္းမွာ သူ႔ကို ဘယ္လိုေလးမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္ရမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ္အခံေလးနဲ႔ ဆက္ဆံႏိုင္မယ္ဆို အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့္ဘဝေလးလည္း ေအးခ်မ္းပါတယ္။ ဘယ္လိုခြဲခြာမႈအတြက္မဆို ေနာင္တ ရစရာလည္း မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။
တကယ္ေတာ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္ဟာ အေပးနဲ႔အယူ ယွဥ္လာတိုင္း ကိုယ့္ဘက္က ေပးလိုက္ရတာကို ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတတ္တဲ့ စိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၉။ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္
ေအာင္ျမင္လာရင္ မနာလို ျဖစ္ၾကမယ္၊ ရႈံးနိမ့္ရင္လည္း ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ၾကမယ္၊ ကိုယ္ ေသခ်ာမသိလည္း သြားပုပ္ေလလြင့္ ေျပာၾကမယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပၚလာေတာ့ ပိုဆိုးတယ္။ အားလုံးက ဒီအေပၚမွာ ျမင္ေနရတဲ့ အေပၚယံအခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ မွတ္ခ်က္ေတြ ေပးေန၊ ေဝဖန္ေန၊ ဆဲဆိုေနၾကတာ။ ေျပာရရင္ ဒါ လူ႔သဘာဝပဲ။
ဒါေၾကာင့္ အဲ့လို ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြရဲ႕ အျပဳအမူေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ အတက္အက် ျဖစ္ေနသေ႐ြ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာ္႐ႊင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို သိေစခ်င္ပါတယ္။
Dr. Phio Thiha Life Balance Lifehack ခေတ်သစ် ဆောင်းပါးများ ပျော်ရွှင်ခြင်း
Chu Zim December 15, 2021 at 9:20 PM
First Cmt 😇
San Zuren December 15, 2021 at 10:24 PM
တော်လှန်ရေးမှာ ငါမပါလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့ ငါပါကိုပါရမယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရဲရဲချပါ ပြီးရင် ဘာကိုမှ
Sammi December 16, 2021 at 1:16 AM
ကိုယ့်ချစ်သူ​​လေး ထမင်းစားချိန် ​နောက်ကျအုံးမယ်
ညနက်သန်း​ခေါင်ထိ အိပ်​ရေးပျက် မခံပါနဲ့
San Zuren December 16, 2021 at 9:17 AM
Sammi December 17, 2021 at 12:59 AM
မသိချင်​ယောင် ​ဆောင်​နေလို့ မင်မင်က 😝😝
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 7, 2022 at 3:33 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 2:05 AM
Thu Zar December 16, 2021 at 5:57 AM
အွဲ December 16, 2021 at 9:04 PM
Swe Zin Mar December 17, 2021 at 5:42 AM
Let us walk toward our goal👍🏻❤💪🏻🧡💜
RT December 17, 2021 at 6:12 PM
Su Su December 18, 2021 at 5:07 AM
Su Su December 19, 2021 at 5:29 AM
Win December 19, 2021 at 8:27 PM
Thar Htwe December 20, 2021 at 7:42 PM
Yuppie December 20, 2021 at 11:40 PM
ZawZawHtet January 6, 2022 at 7:56 PM
Unknown January 6, 2022 at 7:56 PM
ဒီစာလေးဖတ်ပြိတော့ကိုယ်ကိုအချိန်ဖြုန်းနေမှန်းသိလိုက်ရတယ် တကယ်ကောင်းတဲ့စာလေးပါ..... done🤫
Unknown January 6, 2022 at 8:03 PM
Unknown January 6, 2022 at 8:16 PM
Thanks for sharing Dr
Kan January 6, 2022 at 8:17 PM
Clickers တွေရဲ့ နေ့စဉ်မရိုးရသော
Love all Clickers
Ancro January 6, 2022 at 8:20 PM
အရမ်း ကောင်းလိုက်တဲ့ စာလေး...
ဒါဖတ်ပီ ငါလည်း ပြုပြင်စရာတွေလည်း အများကြီးပါလား
Unknown January 6, 2022 at 8:22 PM
Dar Dar January 6, 2022 at 8:45 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:12 PM
Thanos ဂျီးကစားနေတာလား....CCTV ကလဲအမြဲကုတ်..
M January 6, 2022 at 9:14 PM
M January 7, 2022 at 2:45 AM
This about all"
to thine own self true,
And it must follow,as the night the day,Thou canst not then be false to any man"
Kyaw mae yaung January 6, 2022 at 9:40 PM
zaw ko htet January 6, 2022 at 9:51 PM
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ရရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲ
Unknown January 8, 2022 at 4:27 AM
အ​မေ့သမီး January 6, 2022 at 9:56 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:56 PM
nyi hmue thwin January 6, 2022 at 10:03 PM
ဘေအကူညီခဏခဏတောင်းနေရလို့အားနာနေပါပီဗျာ အားနာရင်းနဲ့အကူညီထပ်တောင်းပါရစေ ကျနော့လ​ိုဘဲတခြားအကူညီကျနော့ဆီလာတောင်းရင်လဲကျနော်ပြန်ကူညီနေရတော့ ကျနော်အားရင်အားသလိုကလစ်တော့အနည်းဆုံး1နေ့ဘေ2ထောင်ကပုံမှန်ကုန်ပါတယ်ခင်ဗျ တနေ့မှကလစ်မပျက်ဘဲကလစ်လာတာပါဗျ ညဘက်တွေပိုကလစ်ပါတယ်ခင်ဗျ နည်းနည်းလောက်အဆင်ပြေတဲ့သူတွေဘေလေးအကူညီးပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ09892127703ကျနော်ရှာလို့်ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေကိုလဲwaveထဲကနေတဆင့်ဖုန်းဘေပြန်ကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျ
Unknown January 6, 2022 at 10:06 PM
အရည်အ သွေး မြှင့်ကြစိူ့ အနာဂါတ် လှပဘို့
Naing ko January 6, 2022 at 10:16 PM
Su Khit January 6, 2022 at 10:20 PM
We must win 💯👍
Unknown January 6, 2022 at 10:38 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:52 PM
Aung Myint Than January 6, 2022 at 11:04 PM
Of course 🎆👍👍👍
Moe nay January 6, 2022 at 11:26 PM
Keep on fighting, clickers!
January January 6, 2022 at 11:43 PM
Unknown January 6, 2022 at 11:45 PM
World Wide January 6, 2022 at 11:51 PM
Thanks C2D Admin
Than Than January 7, 2022 at 12:10 AM
Thet Aung January 7, 2022 at 12:24 AM
minm99762@gmail.com January 7, 2022 at 12:34 AM
Capt Ye Thu January 7, 2022 at 12:49 AM
Naing ko January 7, 2022 at 12:59 AM
Unknown January 7, 2022 at 1:50 AM
Hla Hla Nue January 7, 2022 at 1:55 AM
We support this arrival exactly
Hla Hla Nue January 7, 2022 at 1:57 AM
We support these facts exactly
Unknown January 7, 2022 at 2:20 AM
မအလ maaloo
Khaing Swe Mar January 7, 2022 at 2:43 AM
M January 7, 2022 at 2:46 AM
"This about all"
Unknown January 7, 2022 at 2:58 AM
တို့ တတွေ အားလုံးတော်လှန်ရေးကြီးအောင်
မြင်ပြီး နိုင်ငံ သစ်ထူထောင်ကြမည်.
Shwe Nyaung January 7, 2022 at 3:13 AM
kono dio da January 7, 2022 at 3:20 AM
မနေ့က ကလစ်တာ blogs တခုမှမရဘူး
Chittoo January 7, 2022 at 3:21 AM
Unknown January 7, 2022 at 3:29 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 7, 2022 at 3:36 AM
ပန်း တိုင် ကို သွား ရ တယ် ဆို တာ
လ ရောင် အောက် မှာ
လမ်း လျှောက် တာ မှ မ ဟုတ် တာ"
ကလစ်ကူရင်းအားယူ ရှေ့ဆက် ☘️
PaPaWaDe January 7, 2022 at 3:51 AM
Thet Wai January 7, 2022 at 4:22 AM
Raj January 7, 2022 at 4:37 AM
Help me bill please 09757551985
Yaminn January 7, 2022 at 5:10 AM
Wah Wah January 7, 2022 at 6:00 AM
ko ko zaw January 7, 2022 at 6:07 AM
Kyaw1972 January 7, 2022 at 6:09 AM
Saw San Myint January 7, 2022 at 6:16 AM
myo thet January 7, 2022 at 6:48 AM
ဗဟုသုတတွေ ရရှိပါတယ်ဆရာ...ကျေးဇူးပါ Dr.
Wu Yi Fan January 7, 2022 at 8:50 AM
Unknown January 7, 2022 at 9:22 AM
Wanna got job .
ko Thet January 7, 2022 at 5:58 PM
Unknown January 7, 2022 at 7:42 PM
အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ။ အားတွေလဲရှိရပါတယ်🙏🏻
Myint Zu Thin January 8, 2022 at 12:10 AM
Unknown January 8, 2022 at 1:11 AM
Zin Ko Lwin January 8, 2022 at 6:25 PM
May Htoo Sein January 8, 2022 at 10:20 PM
Clicker January 9, 2022 at 12:40 AM
Triple K January 9, 2022 at 7:27 AM
MK January 9, 2022 at 5:31 PM
🎶 ဟိုးရှေ့မှာ လင်းလက်နေတဲ့
🎶 RIGHT HERE.. RIGHT NOW
SO RISE UP🎶
angelkhine January 13, 2022 at 6:20 AM
I'll stay healthy.
Unknown January 15, 2022 at 8:03 AM
Nyein January 21, 2022 at 7:15 AM
Mggyi January 24, 2022 at 10:35 AM
Ty Admin ☺️
梅干 February 4, 2022 at 9:02 AM
Unknown February 7, 2022 at 11:11 PM
Unknown April 15, 2022 at 6:11 PM
PaPaWaDe April 27, 2022 at 6:49 AM